Shiinaha Saldhigga Shiinaha (Isku Xidhka Albaabka) PM2 Taxanaha Iskuduwaha Iskuduwaha DC iyo soosaarayaasha | FEIMAI
Saldhigga Saldhigga (Isku Xidhka Albaabka) PM2 Taxanaha Wareegtada Kala-Bixinta DC
Base Saldhig ku rakiban tareenka dinka, oo xarkaha albaabka albaabkiisa laga soo geliyey
• Dhererka usheeda dhexe ayaa laga habeyn karaa macaamilka
• XIRAN qufulka
ADELS Series DC Isolator Switches ayaa lagu dabaqayaa l ~ 20 KW nidaam degenaansho ama ganacsi sawir leh, oo la dhigayo inta u dhexeysa modulladaha sawir qaadista iyo rogayaasha. Waqtiga gelitaanka waa in ka yar 8ms, taasi waxay ilaalinaysaa nidaamka qoraxda mid amaan ah. Si loo hubiyo xasilloonideeda iyo nolosha muddada dheer, alaabtayada waxaa lagu sameeyaa qaybo leh tayo wanaagsan. Max danabku waa ilaa 1200V DC. Waxay haysaa hoggaan aamin ah oo ka mid ah alaabada la midka ah.
PM2 Series DC Isoator badalato
Nooca FMPV16-PM2, FMPV25-PM2, FMPV32-PM2
Lagu qiimeeyay waqti-gaaban adkaysi hadda (lcw) lkA.ls
Kala-baxa Ma jiro wax kala go ',,+ ”A nd“ - ”khaladaadyada waa la is weydaarsan karaa
Taxanaha PM2 Taxanaha Isolatoreyaasha waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu beddelo Direct Current (DC) oo laga xareeyo ilaa 1200Volts. Naqshaddooda adag iyo awoodda ay u leexan karaan danabyada noocaas ah, xilligan la qiimeeyay, waxay ka dhigan yihiin inay si ku habboon ugu habboon yihiin in loo isticmaalo beddelka nidaamyada Photovoltaic (PV).
Si loo yareeyo fursadaha qaanso faafinta, ku-beddelashada taxanaha 'PM2 Series' wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda xiriirka wareega. Tan waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo oo lagu jebiyo wareegga iyada oo loo marayo isku xirnaanta laba jibbaar xiriir ah oo tirtiraya markay socoto. Ficil-tirtirka ayaa leh faa iidada dheeriga ah ee ilaalinta wajiyada xiriirka oo nadiif ah taas oo yareyneysa caabbinta wareegga iyo kordhinta nolosha biilasha.
Hore: Taxanaha ELR1 oo lagu soo lifaaqay Nooca Qufulka leh ee Rotary Handle DC Isolator Switch
Xiga: Gudbinta Gudbinta Taxanaha PM1-2P Taxanaha Kala-goynta DC